धेरै जागिरे महिलाको परपुरुषसँग सम्बन्ध हुने खुलासा ! - IAUA
ramkrishna December 19, 2016	धेरै जागिरे महिलाको परपुरुषसँग सम्बन्ध हुने खुलासा !
विबाह गरेपछि जागिर खाएका महिलाहरू मध्ये धेरैजसोको बाहिर परपुरूषसंग सम्बन्ध कहुने कुराको खुलासा गरिएको छ । बैवाहिक जीवनमा लोग्ने स्वास्नी भएपछि सम्भोग भन्ने कुरा सामान्य हो । साथै वैवाहिक जीवनमा त यो धेरैनै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । तर यस खुलासाले भने धेरै मानिसहरूलाइ आश्चर्यमा पारिदिएको छ ।
Next Next post: कसरी थाहा पाउने सम्बन्ध टुट्न लागेको ?